Sri Lanka Tour si Bhubaneswar | Kpọọ na: + 91-993.702.7574
Sri Lanka, nke a maara n'oge gara aga dị ka Ceylon, bụ obere agwaetiti dị n'ebe ndịda nke India, n'Oké Osimiri Indian, mana nke ahụ bụ nanị obere ihe gbasara obodo mara mma. Na njem Sri Lanka site na ngwugwu Bhubaneswar, ị ga-ahụ ebe ndị na-akpali akpali na Sri Lanka. Mpaghara ya dị iche iche na-esi n'ọhịa mmiri na ala akọrọ nke ọkpụkpụ mee ka ọ bụrụ mba dị mma na ájá ájá. Obodo ahụ na-etu anya mmepeanya oge ochie, osimiri osimiri aja aja nke nwere osisi nkwu, ugwu, na roba na osisi tii. Na njem Sri Lanka na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ nke si na Blubaneswar, ị nwere ike ịnweta ahụmahụ niile na-atụgharị uche na Sri Lanka. Mgbe ị na-aga n'àgwàetiti ahụ, ị ​​ga-ahụ ụlọ ọrụ colonial site n'oge ndị Portuguese, Dutch na Bekee chịrị. Ị ga-ahụ nza nke enyí, ụfọdụ n'ime ha na-ekere òkè n'ememe obodo na, agụ owuru na ebe nsọ anụ ọhịa. Sri Lanka bụ mba bara ụba na akụkọ ihe mere eme, omenala, na omenala. Maka ndị njem nleta na-achọ ịhụ akụkọ banyere ebe ọ bụla, Sri Lanka na-enye triangle omenala ha. Njem Sri Lanka nke si na Bhubaneswar ga-eme ka ị maa jijiji na ihe niile dị mma. A makwaara Sri Lanka maka osimiri ndị dịpụrụ adịpụ na anyanwụ anyanwụ na-enwu gbaa gburugburu n'afọ. Sri Lanka na-etu ọnụ maka ụfọdụ nnukwu National Park dị ka Yala National Park, Wilpattu National Park, Minneriya National Park, Udawalawe National Park na Horton Planes. Njem Sri Lanka nke si na Bhubaneswar ga-eme ka ị chọpụta obere igwe na Ocean Ocean.
O nwere ihe ọ ga-enye ụdị njem nleta ọ bụla - Ezigbo ndị hụrụ n'anya, ụmụaka, adventurous ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ. Ọganihu nke njem ndị njem na Sri Lanka enweghị ihe ịrịba ama ịkwụsị n'oge na-adịghị anya. Dee nchịkọta ezumike Sri Lanka ugbu a.
DAY 01: KATUNAYAKE - KANDY - 115 Kms 2.5 Awa
Gaa na Bandaranaike International Airport, Katunayake nwetara site na "Spiceland Colombo" na-anọchite anya na họtel na Kandy site Pinnawala.
Orphanage Elephant, Pinnawala:
Onye na - azụ anụ - ụlọ nke enyí nke dị iche iche na ịba ụba, ịsa ahụ, igwu egwu ọnụ na ọbụna mating. A chọtara ndị a merụrụ ahụ ma ọ bụ hapụrụ ahapụ n'ala ịkpa. Ọbụna obere nwa ehi a mụrụ na mpụga.
Oge tebụl nke Orphaned Elephant:
08.30am Ịmeghe ụmụ mgbei maka ndị ọbịa
Ngwunye 09.15am-na-azụ ụmụ enyí
10.00am Morning bath in 'Ma Oya'
Egwuregwu Elekere XNumaị na-alaghachi na-elekọta ụmụ mgbei mgbe ịsachara
Boolu 01.15pm-na-azụ ụmụ enyí
02.00pm N'ehihie ụtụtụ bath na 'Ma Oya'
04.00pm Elephants laghachiri na-arụ ọrụ mgbe ọ na-asa
Boolu 05.00pm-na-azụ ụmụ enyí
06.00pm Na-ekpochapụ ụmụ mgbei maka ndị ọbịa
Ogige Utu na Hingula (Kandyan Spice 99):
Na-aga n'okporo ụzọ dị n'etiti Colombo na isi obodo dị na Kandy. Gaa na ogige mkpụrụ osisi na Mawanella ka ị hụ ọtụtụ ngwa nri Sri Lanka bụ maka. Osisi, Cardamom, Pepper, Cloves na nutmeg emeela ebe ahụ. Na mgbakwunye na nke ọ bụla ngwa nri, ala ahụ rere ya mbipute Sri Lanka curry ntụ ntụ.
Ụlọ nsọ nke Sacred Tooth Relic nke Buddha bụ ụlọ nsọ kachasị mkpa maka ndị Buddha Sri Lanka ma wuo ya na 16th Century AD site n'aka eze Wimaladharmasooriya, naanị maka nzube ụlọ obibi ezé.
Nri ehihie na nri abalị na-anọ na nkwari akụ na Kandy.
Nri ụtụtụ na nkwari akụ na Kandy & hapụ Nuwara Eliya site na Peradeniya na Ramboda.
Ogige Ugwu Royal, Peradenia:
Nke a bụ ubi na-atọ ụtọ nke Kandyan King of the 16th Century ma mesịa mee ya n'ogige Botanical n'oge ọchịchị Britain.
Oge eji eme ihe: 7.30AM - 5.00pm (kwa ụbọchị)
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ: 10.00AM - 5.00pm
Gem Museum ("Tiesh" nke Lakmini):
Tiesh nke a maara dị ka Lakmini Pvt Ltd bụ ogige ntụrụndụ maka nkume ndị dị oké ọnụ ahịa na ọmarịcha ọla edo nke kachasị mma n'afọ. N'etiti ọtụtụ Sri Lanka nkume ndị dị oké ọnụ ahịa nke a na-akwanyere ùgwù n'ụwa nile bụ Blue Sapphires, Star Sapphires, Rubies, Star Rubies, White Sapphires, Yellow Sapphires, Cats Eye, Etc.A bụ akụkụ pụrụ iche nke ntọala ahụ bụ Gem mine gwụrụ iji mee ka ọ dị oké ọnụ ahịa nkume ndị dị na Sri Lanka. N'ịbụ nke dị na Sri Lanka nke dị na foto a nke zuru oke-obodo Kandy "Tiesh" na-eketa n'akụkụ niile nke ndị ahịa. Tiesh site na Lakmini anọwo na-ebute ọdịdị nke oge ugbu a na ihe ịchọ mma kemgbe ọ malitere na 1997.
N'ihe dị ka mita 1500 dị elu karịa larịị nke dị na Labookellie Estate, otu n'ime osisi ndị kachasị mma na Sri Lanka, bụ taa nkwụsị na-ewu ewu na njem njem ndị njem ụwa dum na-enye ohere ịnweta Mackwoods Tea kachasị mma n'ugwu ugwu ugwu yana inye nkọwa nke nkuzi nke Ceylon Tea. Ụlọ ọrụ Labookellie Tea, bụ nke dịworo anya n'etiti ndị obodo na ndị njem nleta na Nuwara-Eliya si Kandy maka ihe ndị ha chọrọ n'aka Labookellie Tea. Ụlọ ọrụ Tea a amụbaala ma gbanwee iji nye ọtụtụ ndị nleta & ndị ahịa ọrụ ka mma na ntọala dị mma. Mackwoods na-enye ndị ọbịa nleta na-edughị n'efu na ụlọ ọrụ Labookellie tii, ahụmahụ mmụta na usoro ịkụ na tiivi.
Ugwu ukwu ugwu, oké ọhịa na ndagwurugwu nke Tea Estates, obere iyi mmiri convergent na ugwu ugwu mụrụ ụfọdụ n'ime mmiri ndị kachasị mma Sri Lanka, otu n'ime ha bụ "Ramboda Waterfalls" na Nuwara Eliya. Na-agbasi elu na 3200ft dị elu. Ramboda Falls na-ewetara agwaetiti a mara mma na ịma mma na-eme Sri Lanka bụ ebe ndị njem nleta na-ewu ewu maka magburu onwe ya na ọdịmma ịhụnanya.
Nri ehihie na nri abalị N'abalị na-anọ na nkwari akụ na Nuwara Eliya.
DAY 03: NUWARA ELIYA - BENTOTA - 240 Kms - Oge 5.5
Nri ụtụtụ na nkwari akụ na Nuwara Eliya wee pụọ na Bentota
Nri ehihie na nri abalị na-anọ na nkwari akụ na Bentota.
DAY 04: BENTOTA - COLOMBO - 65 Kms - 2 Awa
Nri ụtụtụ na nkwari akụ, Bentota ma hapụ Colombo
Ejila oru ngo iji chebe onu ogugu ndi mmadu na-eru ebe ozo na ihe ndi di otua di n'ugwu ndida Sri Lanka ebe umuaka biara n'osimiri ka ha debe aturu ha. Aturu na-egwu olulu n'Ọdọ Mmiri ahụ, Debe ya àkwá ma kpuchie ya na ájá ebe ọ kwesŽrŽ, nke anyanwụ gaadŽrŽ. Ihe na-emekarị bụ na onye na-akụ azụ gwuru àkwá ma rere ndị na-eri ha. Ma ugbua, a na-azụta àkwá site oru ngo nchekwa ma na-ejupụta n'ụzọ dị egwu n'ime ebe ndị nnụnụ na-enweghị ohere ịchọta ha na ụmụ ọhụrụ ka a ga-abanye n'oké osimiri mgbe ụbọchị abụọ gasịrị n'abalị ha bụ ohere ka mma.
Njem Colombo City:
Na-agafe site na azụmahịa na obodo a maara dị ka Fort, nke Portuguese na 16th narị afọ. Gaa na ahịa na Petta, na-eleta Buddhist na ụlọ nsọ Hindu, otu chọọchị Dutch ochie ma na-aga n'ihu n'ógbè Cinnamon Gardens. Na-agafe Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ, Independence Square na BMICH (International Convention Center).
Ịzụ ahịa na; (na mmasị)
ụdị ụlọ ejiji
Paradaịs okporo ụzọ Paradise
Obodo dị ebubeLiberty Plaza
Nri ehihie na nri abalị Na-anọ na nkwari akụ na Colombo.
Nri ụtụtụ na nkwari akụ na Colombo.
Dị ka ụgbọelu gị si agbago maka Ọdụ Ụgbọelu International nke Bandaranaike, Katunayake maka Ịpụ. Ọgwụgwụ njem.